उत्तम प्रशिक्षण Leashes: यो कसरी प्रयोग गर्ने र तपाइँ के जान्नु पर्छ | कुकुरहरुको संसार
सुसाना Godoy | 22/09/2021 15:39 | कुकुरका सामानहरू, प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पट्टा अर्को तत्व हो कि हामी पनि धेरै नजिक हुनु पर्छ। तर यद्यपि यो एक बिट अचानक आवाज लाग्न सक्छ, यो सत्य हो कि यो मनपर्ने उपकरणहरु मध्ये एक हो किनभने यो मालिक र उनको पाल्तु जनावर को बीच एक गैर मौखिक सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। तेसैले, तपाइँ पनि प्रत्येक आन्दोलन मा विशेष ध्यान दिनु पर्छ।
तर यो केहि छ कि हामी पछि देख्नेछौं र जस्तै को रूप मा, यसले हामीलाई मद्दत गर्न को लागी थोरै भन्नु भएको उत्पादन को आधारभूत कार्यहरु लाई बुझ्न मद्दत गर्दछ। प्रशिक्षण पट्टा संग हामी पक्का छौं कि हाम्रो जनावरहरु सधैं सुरक्षित छन्तेसैले, हामी सधैं उनीहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो एक छान्नु पर्छ।
1 कुकुर प्रशिक्षण पट्टा के हो
2 प्रशिक्षण पट्टा कति लामो हुनुपर्छ?
3 कसरी हाम्रो कुकुर को प्रशिक्षण को लागी एक पट्टा पट्टा को उपयोग गर्न को लागी
4 हामी कहिले प्रशिक्षण पट्टा को उपयोग शुरू गर्नुपर्छ?
5 कुकुर प्रशिक्षण पट्टा कहाँ किन्न
कुकुर प्रशिक्षण पट्टा के हो
Looxmeer कुकुर पट्टा ...
dibea कोरिया द्वारा lionto ...
प्रशिक्षण बेल्ट ...
कुकुर प्रशिक्षण पट्टा को उद्देश्य तपाइँको पाल्तु जनावर शिक्षित गर्न को लागी हो। तर यो उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, विशेष गरी जब तपाइँ एक पैदल यात्रा को लागी वा शायद कसरत को समयमा। तेसैले, हामी यो कुकुर को कलर को भाग मा पकड्न को लागी एक हुक छ र अर्को छेउ मा एक राम्रो फिनिश जहाँ हामी समस्या बिना यसलाई बोक्न सक्छौं।
तेसैले, मोटो रूप मा बोल्दै, हामी त्यो भन्न सक्छौं यसको प्रयोग हाम्रा घरपालुवा जनावरहरु को व्यवहार मा सुधार, साथ साथै उनीहरुको सुरक्षा मा केन्द्रित छ.
प्रशिक्षण पट्टा कति लामो हुनुपर्छ?
यो एक प्रश्न है कि हामी एक कुंद तरिका मा जवाफ दिन सक्दैन। किन? ठिक छ, किनकि सबै कुरा विशेष गरी कुकुर को आकार मा निर्भर गर्दछ। मेरो मतलब, सुरु गर्न को लागी तपाइँ दुबै तौल र आकार र तपाइँको प्यारी को उचाई जान्न को लागी आवश्यक छ। यस तरीकाले तपाइँ पहिले नै उसको आवश्यकता को बारे मा एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबै कुकुरहरु उस्तै छैनन्, न त मापन मा न त स्वभाव मा।
तेसैले, यो भनिएको छ कि कुकुर स्वतन्त्र रूप मा सार्न को लागी आवश्यक छ, तर यो पनि, हामीलाई आराम छोड्नुहोस्, त्यसैले न्यूनतम लम्बाई5मीटर को आसपास हुनु पर्छ, जो तथाकथित मानक हो। यो महत्वपूर्ण छ कि यदि तपाइँको कुकुर सानो छ यो यो लम्बाई भन्दा बढि छैन र याद छ कि यो सधैं राम्रो छ कि यो एक सानो पतली हो। जबकि कि यदि कुकुर 20 किलो को आसपास छ, तब तपाइँ एक मोटो पट्टा आवश्यक छ किनकि हामी अधिक प्रतिरोध को आवश्यकता हुनेछ तर लगभग ३ मिटर को लम्बाइ पर्याप्त छ।
मध्यम वा साना कुकुरहरु लाई फर्काउने, हामी जान्दछौं कि उनीहरु अधिक अधीर हुन्छन्, कि उनीहरु हर कदम मा गन्ध र खेल्न मन पराउँछन्, त्यसैले यो सबै भन्दा राम्रो छ कि एक एक्स्टेन्सिबल मा शर्त गर्न को लागी। जबकि जो पट्टा मा धेरै तान्छन्, यो सधैं राम्रो छोटो संग यो लगाउन को लागी। यस प्रकार केहि झट्काहरु बाट बच्न जब हामी लापरवाह छौं। ठूला कुकुरहरु को लागी, ट्र्याकि for को लागी वा एक धेरै एकान्त ठाउँ मा एक पैदल यात्रा को लागी जाने, यद्यपि उनीहरु सबैभन्दा उपयुक्त छैनन्, तपाइँ २० मिटर भन्दा बढी को पट्टाहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि अतिरिक्त लामो छन्।
कसरी हाम्रो कुकुर को प्रशिक्षण को लागी एक पट्टा पट्टा को उपयोग गर्न को लागी
जसरी यो जीवन को सबै चरणहरु मा हुन्छ, प्रशिक्षण पट्टा पनि केहि दिशानिर्देशहरु को आवश्यकता छ ताकि हाम्रा जनावरहरु लाई यो प्रयोग गरीन्छ।
पहिलो, यो हाम्रो घर जस्तै एक बन्द ठाउँ मा पट्टा राख्न को लागी राम्रो छ र यो संगै हिड्न दिनुहोस्.
यसलाई मा न तर्नुहोस्, तर यो जनावर को लागी तपाइँको कलहरु र पट्टा मा जान को लागी यो परिचित हुन सक्छ भनेर राम्रो छ।
एक पटक बाहिर, तपाइँ उसलाई सबै समय मा मार्गदर्शन गर्नु पर्छ ताकि उहाँ जहाँ तपाइँ भन्नुहुन्छ, तर पुल को उल्लेख गरीएको बाट जोगिन जान्छ।
सबै कदमहरु उसले राम्रो गर्छ, तपाइँ उसको प्रशंसा गर्नु पर्छ, जबकि यदि उसले झट्का दिन्छ वा विपरित गर्छ, हामी उसको नजिक आउन र उसलाई लाड गर्न बाट जोगाउँछौं ताकि उसले बुझ्यो कि केहि ठीक छैन।
जब पट्टा तंग छ र कुकुर तान्दै छ, उठ्नुहोस् र जारी राख्नुहोस् जब तपाइँ यसलाई धेरै ढीला देख्नुहुन्छ।
हामीले गर्नै पर्छ छोटो पट्टा संग पैदल शुरू गर्नुहोस् र यदि हाम्रो घरपालुवा जनावर झट्का छैन, तब हामी अलि बढी डोरी ढीला गर्न सक्छौं। यो सधैं नियन्त्रण मा रहन को लागी एक तरीका हो।
यदि तपाइँको कुकुर पट्टा मा चबाउन थाल्छ, तब यो राम्रो छ कि उनीहरुलाई पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर वा उनीहरुलाई फेर्दै फ्याँक्न। तपाइँ महसुस गर्नुहुनेछ कि केहि परिवर्तन हुन्छ जब तपाइँ त्यो इशारा गर्नुहुन्छ।
पुरस्कार संग उसलाई पुरस्कृत हरेक पल्ट उसले राम्रो संग केहि गर्छ जस्तै हाम्रो छेउमा हिड्ने र एक इनाम बिना उनीहरुलाई रोक्न जब उसले पट्टा तान्दछ, सबै भन्दा बाहिर गरिएका बिन्दुहरु हुन्।
हामी कहिले प्रशिक्षण पट्टा को उपयोग शुरू गर्नुपर्छ?
यो हाम्रो जीवन मा पनि हुन्छ र यसैले, घरपालुवा जनावरहरु को मा, यो पछाडि छोड्न सकिदैन। सत्य यो हो कि जति चाँडो तपाइँ शुरू गर्नुहुन्छ, राम्रो। किनकि तपाइँ ती परिणामहरु देख्नुहुनेछ जुन तपाइँ पहिले अपेक्षा गर्नुहुन्छ। तेसैले, यस संगै हामी तपाइँलाई सल्लाह दिन्छौं कि यदि तपाइँ एक महिना को एक जोडा संग एक पिल्ला छ, तपाइँ प्रशिक्षण संग शुरू।
यो साँचो हो कि तपाइँ यसलाई घर मा गर्नुहुनेछ, उसलाई पट्टा, आदि संग परिचित बनाउन। तर बिस्तारै बिस्तारै, तपाइँ यसलाई पनी लागू गर्नुहुनेछ जब तपाइँ सडकमा हुनुहुन्छ र अर्डरहरु जुन हामीले पहिले उल्लेख गर्यौं। तपाइँ धैर्य, धेरै पुरस्कार वा पुरस्कार र समय प्राप्त गर्न को एक धेरै को जरूरत छ। तर अझै पनी, यो सजिलो हुन्छ यदि तपाइँ शुरू गर्नुहुन्छ जब जनावर एक वयस्क हो।
कुकुर प्रशिक्षण पट्टा कहाँ किन्न
अमेजन को सबै भन्दा सकारात्मक बिन्दुहरु मध्ये एक हो कि एक पटक तपाइँ आफ्नो वेबसाइट मा प्रवेश, तपाइँ एक मजा गर्न सक्नुहुन्छ संभावनाहरूको विस्तृत श्रृंखला। यसको मतलब यो हो कि प्रशिक्षण पट्टिहरु सबै त्यहाँ हुनेछन्। यसको संरचना मा समाप्त बाट, अधिक वा कम हड्ताल रंगहरु, विविध लम्बाई र पक्कै, फरक मूल्यहरु लाई। जसको मतलब यो हो कि तपाइँ सधैं एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै भन्दा राम्रो तपाइँ र तपाइँको कुकुर सूट।
उहाँ आफ्नो नियुक्ति किवोको याद गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो ती पसलहरु मध्ये एक हो कि हामीलाई हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु को लागी आवश्यक सबै कुरा प्रदान गर्दछ। यस अवस्थामा, तपाइँसँग सबै भन्दा राम्रो पट्टा हुनेछ, रबराइज्ड वा ह्यान्डल को माध्यम बाट एक्स्टेन्सिबल को लागी छोटो बाट। एक पूरै सही संसार एक अधिक आरामदायक तरीका मा हाम्रो कुकुर को प्रशिक्षण को लागी।
दुबै नायलॉन पट्टिहरु, जो एक सबैभन्दा सामान्य हो, र ग्रीस गरिएको छालाको, Tíanimal मा पनि हुनेछ। तर यसको विविधता को कारण यो सल्लाह छैन, तर यो पनि किनभने तपाइँ उनीहरुलाई बिभिन्न रंगहरुमा र धेरै किफायती मूल्यहरु संग हुनेछ, जसको बीचमा सामान्यतया सधैं अजीब प्रस्ताव छ। अब समय छ यसको फाइदा लिने!
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » प्रशिक्षण » प्रशिक्षण बेल्ट